1-20KVA Low Frequency UPS (1:1) - Prostar UPS|China UPS|Online UPS|UPS Manufacturers|UPS Suppliers|Inverter|Home Inverter|Solar Inverter|Solar Panel|Solar Module|Battery|UPS Battery
Dana Us: + 86-757-81285488
Vision uye Mission
Service uye Support
OEM uye ODM Servics
Low Frequency kupota
High Frequency kupota
Rack Mountable kupota
Line Interactive kupota
Monocrystalline Solar ukomba
Polycrystalline Solar ukomba
Off-afoot Solar System
On-afoot Solar System
1-20KVA Low Frequency Ups (1: 1)
Muvhunzo Details *
6000 Series Low Frequency Online Ups rakagadzirwa sezvo kubatanidzwa yemhando IGBT michina ine mhoro-kakawanda vakwanise-modulated technology (PWM), izvo kuti mutengi aigona kuwana mhoro-yepamusoro simba goho uye optimized kunyatsoshanda pasi mumwe oparesheni mutoro. Uye yepamusoro modular magadzirirwo kuderedza avhareji nguva yokugadzirisa (MTTR), uye yakanaka maintenance.It kune zvemberi kutotanga-akanaka ano, uye mupepa zvakanakisisa Kugadzikana, kunyange kana kurasikirwa-danho, zvinogona achiri kushanda panguva dzekudya ezvinhu, saka zviri akakodzera chero kuipa simba supply.Double kutendeuka, yakachena Sine Wave goho mutsetse magadzirirwo aigona kupa neyamapani kusarurama wakachena Sine Wave simba, saka unogona kupa yakanakisisa simba kudzivirira kuti vanoshandisa 'equipmentAnd pamwe yoga goho transformer, izvo nechokwadi kuti yose iri voga kuti mutoro uye voruzhinji yemagetsi.
6000 Series Low Frequency Online Upskusanganisira kuroora danho iri & chete chokutambudzika kunze (SU1K-SU10K), vatatu maitikiro mu & matatu maitikiro panze (SP6K-SP30K) .Due ayo akakurumbira maindasitiri uye zvemagetsi design, nemateru kwete chete kugona kushanda vakachengeteka ari ezvinhu akaoma, asi aigona kupa kunonyanyisa kudzivirira muhofisi kushandisa michina, network, kuchengeteka zvikumbiro uye maindasitiri mafomu.
1. Intelligent kudzora vakawanda CPU
Gro kupota ose microprocessor itsva (CPU) co-kugadzwa, izvo kunyatsotaura kudzora parameters ose nemateru uzere ayo masimba, ichipa kadambari simba rakakwana, nechokwadi munoitika nguva dzose pamusoro rinobudirira ezvinhu.
2. Humanized kuratidzwa inowanikwa
LCD dot chizvaro vanoratidza, izvo nemaziso akaratidza anodawo nemateru kuti parameters.LED anoratidza kushanda mamiriro nemateru, uye LCD + akatungamirira anofambidzana aigona kuti iwe kuwana nemateru achimhanya chinzvimbo zvakajeka uye nokukurumidza.
3. High-njere Network kudzora
Kuburikidza kukurukurirana inowanikwa pamwe zvichiongororwa software, izvo zvinogona zvakananga kuongorora munoitika pakombiyuta, nyore simba zvakanaka; optioneel adapteri kure tarisisa (SNMP kadhi), siyana uchishandisa maitiro uye chikumbiro software, uyewo TCP / IP, SNMP , HTTP nezvimwe dzakati rutsigiro, izvo inoita users'requirements kuongorora munoitika Via network, ichi zvakawanda akakodzera decentralized vanoshandisa centralized kutarisira, nokudaro kuwana chairo pose Management.
4. Hapana wechikoro uye omurume mhando, asi adaptive yakafanana Michina
Rine simba akakwana zvakafanana uye hakudi yokuisa kwazvo zvakafanana, zvinogona zvemasanga paIndaneti yakafanana kuwedzera kana N + 1 redundancy mu zvakafanana. Parallel Ups achagoverwa chete boka mabhatiri.
5. Intelligent bhatiri utariri
Adopts munhu-padanho matatu kuchaja nzira, chakanaka hwokuponesa nokuda yakadzika kuerera kubva battery.Independent ano kugoverana uye yakafanana mundiro, izvo zvinogona kuwedzera iye kukwanisa maererano request.It anogona pave uchiraira chikumbiro nokuda refu negadziriro yeparutivi kupota hurongwa. Tiine bhatiri harungashandurwi batanidza kudzivirira, pfupi redunhu kudzivirirwa uye pamusoro tembiricha nedziviriro, uye mamwe mabasa.
SU1K ~ SU3K ( Single uye Single panze )
Kukwanisa (VA / W)
1LDK / 0.8K
2K / 1.6K
3K / 2.4K
ingle danho misara miviri + pasi waya, 220V ± 25%
12V4.5AH × 16
≤55dB (Distance 1M)
Size (W × D × Aaa)
215 × 550 × 500
230 × 570 × 520
SU6K ~ SU20K ( Single uye Single panze )
12V7AH × 16
264 × 530 × 592
264 × 630 × 760
343 × 632 × 740
400 × 620 × 1110
50Hz / 60Hz ± 10%
220V ± 0.5%
50Hz / 60Hz ± 0,05% (DC Supply)
Output pa 0 ~ 50% ~ 100% = 5%, mhinduro = 10ms
Linear Mutoro <3%, Non-Linear Mutoro <5%
110% ≥300 Min, 125% ≥10 Min, 150% ≥1 Min
Lead-asidhi chisimbiso, Nokuraramisa-vakasununguka
Mushure zvizere mhosva, unogona kuzadzwa 90% of zvachose okuita pashure akapiwa kwemaawa 8
Alarm ose 4 mumasekonzi apo simba wedzerai kubudikidza bhatiri uye pasina simba huru.
Battery yakaderera-voltage kudzivirirwa, aramu mumwe wechipiri.
Battery pasi-voltage kudzivirirwa, chinopfuurira aramu
Chinogara chichingoitwa aramu
LCD Panel Board
With kuratidza chiyamuro voltage, goho voltage, kakawanda, DC voltage, goho simba kushanda (%), tembiricha
Main simba, inverter, yokunzvenga, bhatiri, kukundikana, zadzisa
0% ~ 93% (No condensation)
Lower pane 3000 metres pamusoro pegungwa (kukwira)
Hurukuro: Products nokurondedzerwa inozviisa kuchinja pasina chiziviso.
Office kushandisa michina
6000 Series Low Frequency Ups 1KVA-30KVA
Previous: 1-3KVA High Frequency Ups (1: 1) Next:8-100KVA Low Frequency Online Ups (3: 1)
6-30KVA Low Frequency Ups (3: 1)
Tinoedza kupa vatengi tiine unhu zvigadzirwa. Kukumbira Information, Mharidzo & Quote, Contact isu!